How to choose kitchen faucet - Best Kitchen Faucets 2021 | Best Bathroom Faucets | WOWOW Faucets
Ikhaya / Blog / Ungayikhetha njani itepu yekhitshi
2020 / 10 / 29 uhleloBlog 5285 0
Ukukhetha itompu yasekhitshini sisigqibo esibaluleke kakhulu, ngaphandle kwesinki oyifakileyo. Zininzi izinto ezibalulekileyo ekufuneka uzithathele ingqalelo xa ukhetha itompu yekhitshi lakho njengombala mininzi itephu yombala efumanekayo kwimarike enjengebhobho emhlophe okanye emnyama yekhitshi, uyilo kunye nezinye ezininzi esiza kuzichaza apha ngezantsi.
Kuxhomekeke kuhlobo lofakelo onalo, ixesha lokusebenzisa oza kulinika ikhitshi okanye indawo ekhoyo kwisinki yakho, umzekelo, iya kukwenza ukhethe olunye uhlobo lombhobho ongcono kunolunye.
Imiba ekufuneka uyiqwalasele xa ukhetha eyona faucet ikhitshi lakho
Nangona ukukhetha itompu sisigqibo sobuqu, kukho izinto ezichaphazela ukuba uchanekile na okanye hayi. Apha siza kukubonisa imicimbi onokuyithatha ukuze ukhethe eyona ilungileyo. Ke ngekhe uthandabuze kuphando lwakho lweetephu zasekhitshini.
Into yokuqala yazo zonke kukuya kuhlobo lofakelo oluya kuba neetephu. Kwaye oku kuhambelana ngqo nesinki yekhitshi: ukubalwa okungaphantsi, isitya esiphindwe kabini… Kungenzeka ukuba ekhitshini kukho ukubakho okubanzi: nokuba kukubeka iitephu eludongeni okanye kwikhawuntara. Kuzo zombini iimeko, kuya kufuneka kuthathelwe ingqalelo imicimbi embalwa.
Kwikhawuntari: ihlala ixhaphake kakhulu kule mihla. Oku kuthetha ukuba impompo iya esinkini ngokwayo. Lonke ufakelo lwangoku lunalo msebenzi, kuba ulunge ngakumbi kwaye ulawulwa ngakumbi xa kuziwa ekubekeni.
-Edongeni: Olu hlobo lofakelo lwenzeka kumakhaya amadala. Uncedo olukhulu kukuba ishiya indawo ngakumbi kwisinki, nangona umgama phakathi kokungena kwamanzi kufuneka ubekwe esweni. Unxibelelwano luhlala lune-15 cm ububanzi, nangona zinokubakho ukusuka kwi-11 kuye kwi-17 cm.
Nje ukuba uhlobo lofakelo lugqityiwe, oluya kuthi kwakhona luhambelane nenkqubo efakwe ekhitshini lendlu, kuya kufuneka ukhethe uhlobo lokuvula oluza kuba nempompo. Kule meko, zimbini iindidi zeempompo zokuvula amanzi: i-lever-lever okanye isiphatho ezimbini.
Impompo yokubamba eyodwa: Okwangoku, kwaye ngenxa yoyilo olutsha, yeyona nto isetyenziswa ngokubanzi. Ngomyalelo omnye ulawula ukuhamba kwamanzi kunye neqondo lobushushu. Ziyabonakala ngokuxabiseka kwazo kwemali kunye nentuthuzelo, kuba kuphela ngesiphatho ulawula onke amanzi aphumayo. Zilula ukufaka, kwaye i-lever ye-actuation inokufumaneka ngaphambili kumbhobho okanye kwicala, kuxhomekeke kwiimfuno okanye ukuthanda.
Itephu ye -Bi-faucet: nangona zingasasazekanga njengangaphambili, kukwakho neempompo ezinolawulo ezimbini. Kule meko ukumisela iindidi ezimbini zamanzi: amanzi ashushu nolawulo lwamanzi abandayo, ngokusekwe kwinkqubo ye-classic. Zinzima ngakumbi ukusebenzisa kunohlobo lwe-lever enye.
Kuxhomekeka kuhlobo lwesipompo
Ukukhetha uhlobo olufanelekileyo lwetephu kubalulekile. Zininzi iindlela ezahlukeneyo zokusebenzisa kwaye kuxhomekeke kwisinki apho ziya kufakwa khona. Nazi ezinye zeziseko:
Fa Umpompo omkhulu Banokutshiza ngakumbi ngenxa yokuphakama, kodwa banika amandla ngakumbi kwisinki xa bebeka izinto zasekhitshini. Ukongeza, bavumela inkululeko engakumbi xa behlamba izandla, kuba umntu onobude obuphantsi kakhulu uya kuhlala engonwabanga, kwaye ngakumbi ukuba yinto esisigxina. Kunconywe kakhulu kwiindawo apho kungekho zifestile zivula ngaphakathi.
Impompo ephantsi: Uncedo lwayo ngaphezulu kwezinye kukuba azizukuphaphaza. Kananjalo, ayinamsebenzi ukuba uyifaka esinkini ngeefestile ngaphambili, kuba azibethi xa uzivula. Olu hlobo lwespout lishiya indawo encinci esinkini, nangona zilungele zonke iintlobo zofakelo.
-Ifompo yasekhitshini eguqukayo: Ziyacetyiswa kakhulu, njengemodeli yaseVarela yi-OXEN. Kolu hlobo ispout ayisuswanga, iyaguquguquka. Oku kuluncedo kakhulu, kuba yenza kube lula ukucoca isinki, umzekelo, okanye ukunciphisa ispout ukuze amanzi angatshi. Uyilungelelanisa ngokwemfuno. Ukongeza, inkqubo endala yokulwa izinto iyathintelwa, okanye ukubeka i-flexo phantsi kwekhawuntari. Olu hlobo lukwabandakanya uyilo lobungcali.
–I-faucet yentsimbi enespout esusekayo: zifumaneka kuphela ekufakweni kwishelufa, nangona zingaqhelekanga kwiisinki ezincinci. Ukusebenza ngokungafaniyo yeyona nto iphambili kuyo, kuba ispout singasuswa ukufikelela kwiindawo apho ezinye iimpompo zingenakho. Kananjalo, ngokungachaphazeli ikhawuntari, konga amanzi kunye nexesha.
Uyilo yenye into ebalulekileyo xa ukhetha itephu yethu. Ubume, ubungakanani, ukumila… yonke into iyayiphembelela xa uyikhetha ngokuxhomekeke ekubeni izakufakelwa phi okanye ukusetyenziswa kwayo.
Umzekelo, kwiimpompo ezinesiphelo esigqamileyo se-chrome, zihlala zilusuku lokuqala ngenxa yokumelana nokubola, ukubenza bomelele kwaye banganyangeki.
Ngaphambili :: Ungazikhetha njani ezona mpompo zeKhitshi next: Iinkqubo eziMane eziPhambili zoShishino ziye zacinywa, zarhoxiswa okanye zabuya umva umva!